Inqilaabkii la isku dayay Turkiga : Bil ayaa ka soo wareegatay markii la isku dayay inqilaab Turkiga - BBC News Somali
Inqilaabkii la isku dayay Turkiga : Bil ayaa ka soo wareegatay markii la isku dayay inqilaab Turkiga
15 Agoosto 2016
Image caption Dadka Turkiga ayaa iskugu imanayay magaalooyinka waawayn habeenkii saddex toddobaad
Waxaa daloola saqafka dhismaha baarlamaanka
. Meelihii ay ku shiri jireen xildhibaanada meeshii ay ku doodi jireen ayaa hadda waxaa ka buuxa burbur.
Bil ka dib, waxaa jira dulayl siyaasada Turkiga. Waxaa jira in la hadal hayo in qaybo ka mid ah baarlamaanka in loo daynayo siduu yahay, iyadoo noqon doonta xusuus joogto ah ee weerarka Turkiga lagu qaaday.
"Waxay ahayd habeen cabsi badan- laakiin nafteena uma baqeen, waxaan uma baqaynay dadkeena", ayuu sheegay Ravza Kavakci, oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga AK ee talada haya.
"Laakiin maalintaas waxay ahayd maalin aan difaacnay dimoqraadiyada. Dadka Turkiga ayay isku keentay iyagoo is taageeraya. Waxay ahayd dagaal aan isku xoraynayno".
Afar inqilaab milatari tan iyo 1960-kii ayaa ayaa soo dhex galay dimoqraadiyada Turkiga oo wali yar. Laakiin dadka ayaa ka hortagay - dhiig ayaana ku daatay. Recep Tayyip Erdogan, ayaa kala qaybiya dadka - laakiin fariinta 15 July ayaa ahayd dadka Turkiga inay ku dooranayaan mustaqbalkooda siyaasada si doorasho ah oo aysan doonayn milatari inuu qabsado.
Image caption Dhismaha Baarlamaanka ayaa waxaa soo gaaray qasaaro badan ka dib markii la weeraray
Image caption Waxaa la hadal hayaa in loo daayo burburka baarlamaanka si uu xasuus joogto ah u yeesho
Image caption Ravza Kavakci Kan oo ah xildhibaanad xisbiga talada haya ayaa sheegtay in baaritaanada loo samaynayo si furan oo aan qarsoodi lahayn
Image caption Arda Aydin ayaa sheegay in la isku dayaayo in la aamusiyo mucaaradka
Arda Aydin ayaa ka mid ah lix jilaa oo shaqada laga joojiyay si baaritaan loogu sameeyo. Qaar kale ayaa shaqada laga joojiyay ka dib markii sabab looga dhigay "inay shaqadooda ka soo bixi waayeen."
" Waxaa shaqada na looga joojiyay sababtoo ah dowladda ayaan sanadihii la soo dhaafay, laakiin waa wax lagu qoslo in nala dhaho Gelen ayaad taageertaan. "Waxay rabaan inay mucaarad aamusiyaan- laakiin mucaaradka laa aamusin karo".
Saddex toddobaad, kumanaan qof ayaa isugu yimid habeenkii magaalooyinka wayn, iyagoo wata calanka, oo dhagaysanaya qudbooyin siyaasadeed.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa jooga St Petersburg si uu dib ugu soo celiyo xiriirka Ruushka
9 Agoosto 2016
Isu soo bax maanta ka dhacaya Istanbul